Nashqadaha garaafyada ugu muhiimsan taariikhda | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nashqadaha garaafyada ugu muhiimsan taariikhda
Maryan Rose | | dhowr
La dejintaANCia de ka u sheegñadsaliid gráficos a lo weyno de la taariikhyahania de la aadanahatay es tan grande in uu una de las profesiones in maya Serían POSbles dembi isaguos. Farshaxanka naqshadeynta ayaa saameyn weyn ku leh dhaqanka maanta.
Ogaanshaha iyo ogaanshaha in yar oo ku saabsan naqshadeeyayaasha garaafyada ugu muhiimsan taariikhda waa lama huraan marka ay timaaddo qaadashada tixraacyada abuurista iyo naqshadaynta, maadaama fannaaniinta intooda badani ay dhiirigeliyeen. Halkan waxaan kuugu sheegaynaa wax yar oo ku saabsan iyaga.
1 Nashqadaha garaafyada ugu muhiimsan taariikhda
1.1 Saa'uul Bass
1.4 Paul Rand
4 Naqshadeeyayaasha Instagram inay raacaan dhiirigelin
Waxa aanu samaynay xulashada todoba naqshadeeyayaasha garaafyada kuwaas oo hadda saamayn weyn ku yeeshay bulshada maanta naqshadahooda. Halkan waxaan kuugu sheegaynaa wax yar oo ku saabsan iyaga.
Saul Bass fue un ilustraadaar y u sheegñqurxinta gráfico waaadounceidkorna, TODoso by su trabtoonta con el cine iyo naqshadaynta qaar ka mid ah aqoonsiga shirkadaha ugu muhiimsan ee Maraykanka. Wuxuu ku dhashay New Haven, Connecticut, Febraayo 8, 1920 wuxuuna ku dhintay Los Angeles, California, Abriil 25, 1996.
Shaqadiisii ​​hore waxa ka mid ahaa samaynta boodhadhka filimada ee Alfred Hitchcock, Ninka Gacanta Dahabka leh, iyo Gabadha ma caawin karto. Waxa uu sidoo kale ahaa naqshadeeye garaaf ganacsi oo weyn oo loogu talagalay noocyada ay ka midka yihiin. Kleenex, Minolta, Warner Communications, ama AT&T.
Xigasho: Milton Glaser
Milton Glaser wuxuu ahaa sawir-qaade Mareykan ah iyo naqshadeeye sida ugu wanaagsan loogu yaqaanay naqshadayntiisa diiwaannada iyo buugaagta. Wuxuu ahaa aasaasihii PushPin Studios. Wuxuu aasaasay New York Magazine. Waxa uu naftiisa u huray naqshadaynta boodhadhka, oo ay ku jiraan Bob Dylan caanka ah, naqshadaynta rikoodhada, naqshadaynta tifaftirka iyo aqoonsiga shirkadda. Waxa uu sidoo kale dib u habeyn ku sameeyay wargeysyada sida La Vanguardia. Mid ka mid ah naqshadihiisii ​​ugu caansanaa waxay ahayd astaanta I Love New York. Waxa uu ka shaqeeyay daabacado ay ka mid yihiin Paris Macht, L'Express, Esquire ama Voice Village. Wuxuu ahaa naqshadeeye garaafeedkii ugu horreeyay ee helay billadda Qaranka ee Farshaxanka.
Dhanka qaabkiisa waxaan dhihi karnaa waa mid aad u badan. Milton Glasser waxa uu caan ku yahay gudbinta curiye yar, tiro badan oo fikrado ah, hal gabal oo muuqaal ah. Saameynteedu waxay ka timaaddaa ilaalin iyo farsamooyin kala duwan, halkaas oo qoraalka iyo sawirku ay isu yimaadaan.
Paula Scher es una ee naqshadahañadFarshaxanka garaafyada Mareykanka ee ugu caansan adduunka. Wuxuu wax ku bartay Farshaxanka Fine ee Pennsylvania ee Dugsiga Farshaxanka ee Tyler ee Elkins Park. Waxay ahayd agaasimihii ugu horreeyay ee wakaaladda naqshadaynta Pentagram, kaas oo uu ku biiray 1991kii. u shaqeeyay macmiilkaes como Charles Bronson, Coca Cola, Shake Shack, Perry Ellis, Matxafka Farshaxanka Casriga ah, The New Yorkers, Windows kuwa kale.
Sannadihii 80-aadkii, wuxuu sameeyay qaab u gaar ah, kaas oo ay dhiirigelisay Art Deco iyo Dhismaha Ruushka. Waxa uu soo saaray aqoonsiyo badan oo shirkadeed sida tan Magaalada, waxa uu sidoo kale naqshadeeyay daboolka buugaagta, baakadaha iyo xayaysiinta. Qaabkiisu waa mid sifo badan leh, Scherna wuxuu ku muujiyaa xarfaha, kaas oo uu ku dhisayo sawirro aad u xoog badan oo cusub.
Paul rand es uno de ka mace TODosos u sheegñadsaliid gráficos de la taariikhyahania. Waxaa lagu naanaysi jiray aabaha naqshada garaafyada casriga ah, waxa uu ahaa khabiir ku takhasusay naqshadaynta calaamadaha iyo astaanta, y una de las figuras mace muhiim ahes del u sheegño gráfico en waaados UnidMareykanka Paul Rand waxa uu ku dhashay Ogosto 15, 1914 ee Brooklyn, New York. Waxa uu wax ku bartay Parsons The New School for Design 1932 iyo Ururka Ardayda Fanka ee 1933. Waxa uu ahaa Agaasimaha Farshaxanka ee majaladda Esquire y by Arts Arts-GQ.
Sida qaabkiisa, waxaan dhihi karnaa waa casriyeyn leh isticmaalka xafidan ee daabacaadda iyo qaababka joomatari. Paul Rand waxaa saameeyay qaabka Jarmal ee Sachplakat iyo shuqulladii Gustav Jensen. Waxa uu u abuuray aqoonsiyo shirkadeed shirkadaha caanka ah sida IBM, ABC, UPS, Enron, Next iyo kuwo kale.
Xigasho: David Carson
David Carson waa naqshadeeye garaafeed Mareykan ah iyo agaasime farshaxan. Wuxuu agaasime faneed ka ahaa majaladda Ray Gun. Waxa uu ku dhashay gobolka Texas ee dalka Maraykanka sanadku markuu ahaa 1955. Mid ka mid ah waxyaabaha uu xiiseeyey waxa ka mid ahaa surfing, halkaas oo uu ku guulaystay in uu kaalinta 9aad ka galo caalamka. Naqshadeeyehan waxaa loo yaqaanaa ku cusboonaysii qoraal-tijaabo iyo farsamooyin sawir oo kale Waxa uu ku takhasusay qaabaynta tifaftirka iyo muuqaalka maqalka, inkasta oo uu sidoo kale naqshadeeyay boodhadhka iyo albamada muusiga.
Waxa kale oo uu tababar ka helay naqshadeeyaha garaafyada Hans-Rudolf Lutz, oo caan ku ah kala duwanaanshiyaha naqshadaynta iyo daraasaddiisa dhinaca qoraalka. Qayb ka mid ah saamaynta Carson waxay ka timid farshaxan-yaqaankan, marka lagu daro surfing, sawir-qaadista, cilmiga bulshada iyo naqshadaynta garaafyada.
Waxay ahayd naqshadeeye Maraykan ah iyo hormood ka ahayd goobta naqshadaynta garaafyada deegaanka. Waxa uu ku dhashay May 26, 1931 in Brooklyn, New York. Waxa uu xirfadiisa faneed ka bilaabay Ururka Ardayda Fanka ee New York, ka dib waxa uu wax ku bartay Kuliyada Bard ee New York. Ugu dambayntii, waxa uu ku qalin jabin doonaa naqshadaynta garaafyada Machadka Naqshadaynta ee Chicago. Waxa uu ka shaqeeyay daraasadda Charles iyo Ray Fames. Wuxuu ku daray naqshadaynta garaafyada qaab dhismeedyo iyo dhismayaal dadweyne.
Sannadkii 1968-kii, wuxuu go'aansaday inuu istuudiyaha u gaar ah ka furo Santa Monica. Waxaa aasaasay Frank Gehry iyo Gere Kavanaugh, waxaa loo yaqaan Deborah Sussman & Co. Muddadaas, waxay ka shaqeeyeen in ka badan 340 mashruuc oo caan ah. Waxa uu la kaashaday naqshadeeyayaasha sida Philip Johnsons, Olin iyo Barton Myers iyo kuwo kale. Mid ka mid ah mashruucyadiisa ugu caansan ayaa ahaa naqshadaynta muuqaalka iyo muuqaalka dhismaha ee Olombikada Xagaaga ee 1984 ee Los Angeles.
Alexander Taarchut es uno de ka u sheegñadsaliid gráficos iyo qoraal ahaan mace muhiim ahes de nuwaxyi pawaa. Wuxuu wax ku bartay Elisava, Iskuulka Naqshadeynta iyo Injineerinka ee Jaamacadda Barcelona. Comenzó hacidhammaad ilustcunsuriyaddaiones waayo, libros de texto y waayo, agencias de dadweynahatay. Su baabuurrera se ha oo ka mid aharrollbuuqaysaan en ilaado el mundaro, y Waxa uu u shaqeeyay noocyo muhiim ah, sida joornaalka New Yorker, Buugaagta Penguin, Saks Fifth Avenue, Nike, Pepsi, Puma ama The Rolling Stones.
Waxa uu in muddo ah ku noolaa Barcelona halkaas oo uu ku lahaa istuudiyihii naqshadaynta, laakiin wuxuu u guuray Brooklyn, halkaas oo uu kula shaqeeyo macaamiil badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Nashqadaha garaafyada ugu muhiimsan taariikhda
samee Bilaha 5
Hello, waxaan u arkaa xulashadaada mid xiiso leh laakiin waa eex, kaliya waxay magacaabaan naqshadeeyayaasha Mareykanka. Duniduna maaha Maraykanka oo keliya. waxaa jira dalal badan oo adduunka ah.
Ku jawaab Carmen
Sawirada 3D ee bilowgayaasha
Waraaq fiican oo loogu talagalay waraaqaha boostada